Bilyaneer Ka Dhisaya Beerta Xashiishka ee Isle of Man • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Bilyaneer ayaa beer xashiishad ka dhistay Isle of Man
cannabisWararkaWargeysyada caalamiga ah ee cannabis
Bilyaneer ayaa beer xashiishad ka dhistay Isle of Man
albaabka Ties Inc. March 2 2022
maqaal by Ties Inc. March 2 2022
Beer weyn oo marijuana ah ayaa laga yaabaa inay ka dhalato jasiirad yar oo u dhaxaysa UK iyo Ireland. Shirkadda Peel Group, oo ah shirkad hanti maguurto ah oo uu hoggaamiyo bilyaneer 79 jir ah, John Whittaker, oo ah guddoomiyaha shirkadda iyo saamilayda ugu weyn, ayaa raadinaysa inay dhisto xarun lagu beero xashiishadda oo dhan £100 milyan oo u dhiganta ($ 136 milyan) jasiiradda ay xarunteedu tahay.
Xarunta la soo jeediyay, oo ku taal duleedka caasimadda Douglas, ayaa loo isticmaali doonaa in lagu soo saaro xashiishad daawo ah oo loo qaybin doono adduunka oo dhan si loogu qoro bukaannada. Si kastaba ha ahaatee, dalka iskiis isu maamula ayaan weli sharciyeynin xashiishadda dawada, taasoo la micno ah in xashiishadda laga soo saaro xarunta aan weli loo qori karin si loogu isticmaalo jasiiradda.
Chris Eves, oo ah madaxa dhaqaalaha ee kooxda Peel Group, ayaa u sheegay CNBC Arbacadii in xashiishadda ay noqon karto warshad cusub oo faa'iido u leh jasiiradda. "Waxaan u maleynayaa in xashiishadda dawada, xashiishadda dawooyinka, ay tahay fursadda dhabta ah ee soo socota ee jasiiradda," ayuu yiri Eves, isagoo raaciyay in Mareykanka iyo Kanada ay durba bilaabeen bilow adag. "Waxa aan rabno inaan ku horumarino halkan waa unugyo hawada ku xiran," Eves ayaa tiri, iyadoo raacisay in tas-hiilaadka ay dammaanad qaadi doonaan "awoodda ugu badan" ee alaabta.
1 shatiga xashiishadda
2 Horumarrada kale ee muhiimka ah
Dalagga, oo aan weli sharci u ahayn isticmaalka madadaalada ee UK ama Isle of Man, wuxuu noqon lahaa... dib loo cusboonaysiiyay dhowr bakhaar oo waaweyn. Kooxda Peel ayaa markaa rabta in ay ka kireyso dhinacyo kala duwan, kuwaas oo marka hore ay tahay in ay haystaan ​​ogolaansho. Ogolaanshaha soo saarista xashiishadda wali lagama bixin dawladda Isle of Man. Tiro xisbiyo ah ayaa durba soo gudbiyay codsi. Khubarada xashiishada ayaa laga yaabaa in marka hore ay u baahdaan in dibadda laga keeno si ay u helaan xirfada iyo aqoonta lagama maarmaanka u ah. Iibinta xashiishadda ayaa kordhi doonta sanadaha soo socda iyadoo waddamo badan oo adduunka ah ay sharciyeeyeen daawada isticmaalka madadaalada.
Kooxda Peel ma laha wax fikrad ah in isticmaalka xashiishadda madadaalada lagu sharciyeeyo Isle of Man ama dibadda. Eves: "Waqtigan xaadirka ah, waxa aan rabno inaan halkan ku bixino waa daawo kaliya. Dhab ahaantii ma raadineyno isbeddel, laakiin waxay dareemeysaa horumar dabiici ah."
Horumarrada kale ee muhiimka ah
Kooxda Peel waxay qorshaynaysaa inay soo gudbiso arjiga qorshaynta beerta xashiishadda bilaha soo socda. Iyadoo horumarku uu taageero ka helay dadka deegaanka iyo sharci-yaqaannada, ayaa qaar ka mid ah ay ka baqayaan in xaruntu noqoto mid indho-daran. Qaar kale waxay ka baqayaan in beertu ay isticmaasho tamar badan.
"Shuruudaha korantadu waa welwel oo hadda suurtagal maaha," sarkaal Isle of Man ah oo aan la magacaabin ayaa u sheegay CNBC. Kooxda Peel waxay doonaysaa inay samayso beer cadceedda si ay tamarta xashiishada uga shaqeyso. Andrew Newton, oo ah hogaamiyaha Isle of Man's Green Party, ayaa u sheegay CNBC in horumarku uu keenayo dhowr arrimood oo waara oo la tixgeliyo. "Kuwaan waxaa ka mid ah khatarta ah in balaastiig hal mar la isticmaalo ay ku faafto goobta iyo baahida tamarta sare," ayuu yidhi. Newton wuxuu raaciyay: "Waxaa xusid mudan in Peel uu soo jeedinayo NRE si ay u abuurto 11 MW [megawatt] oo dheeri ah oo tamar cagaaran ah si loo xoojiyo xarunta xashiishadda."
Haddii la ansixiyo, horumarku wuxuu ku dhammaan doonaa laba ama saddex weji, iyada oo wejiga koowaad ay u badan tahay in lagu dhammeeyo saddex sano gudahood marka la oggolaado. Shan sano gudahood waxaa jiri kara beer-weyn oo si buuxda u shaqeysa.
Read more cnbc.com (Source, EN)
cannabisbeerista cannabissharciyeyntadaawo cannabisTHCBoqortooyada Ingiriiska
7 Xaqiiqooyin oo ku saabsan CBD Distillate
Siyaasadda maandooriyaha ee aan loo dulqaadan karin ayaa ardayda ka hor istaagta inay raadsadaan caawimo
Dhimashada 'la yaab ma leh': ayaa leh…
Isticmaalka xad-dhaafka ah ee ketamiinku wuxuu u horseedi karaa stoma...
Wasaaraddu waxay raadinaysaa alaab-qeybiyeyaal dawooyin...